Nanao veloma farany an’ilay namorona an’i Mafalda ireo mpanakanto manerantany · Global Voices teny Malagasy
Endrika tantara an-tsary amin'ny teny Espaniola i Mafalda
Voadika ny 11 Oktobra 2020 5:24 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Ελληνικά, русский, bahasa Indonesia, नेपाली, Français, Esperanto , Português, 日本語, Español
Quino nitsidika fampirantiana ny tsingerintaona faha-50 taonan'i Mafalda tamin'ny volana Septambra 2014. Sary avy amin'ny Ministeran'ny Kolontsaina any Arzantina/Flickr (CC BY-SA 2.0)
Nodimandry teo amin'ny faha 88 taonany tamin'ny 30 Septambra ilay Arzantina mpanao sariitatra nahazo mari-pankasitrahana Joaquín Salvador Lavado Tejón. Malaza amin'ny anarana hoe Quino izy, mpamorona ilay olon'ny sariitatra malaza Mafalda- ilay tovovavy revolisionera, feminista, mpandala ny tontolo iainana ary mpandala ny maha-olona izay nambabo ny fon'ny taranaka maro.
Iray andro taorian'ny faha-56 taona nivoahan'i Mafalda voalohany no nitranga fahafatesan'i Quino. Avy hatrany dia niely tamin'ny vazantany rehetra nanerana izao tontolo izao ity vaovao ity ary nahatonga fanomezam-boninahitra tamim-pahatsoram-po avy amin'ny sehatra fampahalalam-baovao tsy hita isa, mpanakanto ary ireo olo-malaza.
Nanjary iray amin'ireo sariitatra malaza amin'ny teny Espaniola ny Mafalda ary nadika tamin'ny fiteny miisa 30 mahery, anisan'izany ny fitenin-tompotany Guaraní. Iraisan'ny rehetra ny hafany momba ny politika, ny fiarahamonina, ny tontolo iainana ary ny vehivavy ary mbola manan-danja amin'izao fotoana izao.
Ny sariitatra Mafalda miaraka amin'ny vazivazy politika mahatsikaiky. Saripikan'i “¡¡¡!!!”/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0) Ao amin'ny tantara sariitatra: “DEMOKRASIA (avy amin'ny teny Grika demos, vahoaka, sy kratos, manampahefana). Governemanta izay ampiasain'ny vahoaka amin'ny fiandrianam-pirenena.”
Niteraka resabe tamin'ny androny tahaka ny ankamaroan'ny sanganasan'i Quino i Mafalda. Miaraka amin'ny vazivazy ankolaka, nahavita namitaka ny sivana tamin'ny fitondrana jadona Arzantina izy, na dia noraràn'ny mpanao didy jadona Augusto Pinochet tany Shily aza.
Nalaza tamin'ny andiam-pandaharany manokana tao amin'ny fahitalavitra i Mafalda sy ny namany ankoatra ny fampitam-baovao vita pirinty (tantara an-tsary, gazetiboky ary boky). Tao anatin'ny sivy taona monja (teo anelanelan'ny 1964 sy 1973) no nambaboany izao tontolo izao ary nanjary lasa “marika manerantany maneho ny fikomiana sy ny finoana ny tontolo tsaratsara kokoa“.
Tototra tantara an-tsariny sy fanomezam-boninahitra avy amin'ny mpanakanto mpanao sariitatra hafa avy any Arzantina sy izao tontolo izao ny tambajotra sosialy taorian'ny vaovao fahafatesan'i Quino.
Avy amin'i Liniers, mpanao sarimiaina Arzantina monina any Etazonia ankehitriny ity hafatra ity:
Naneho ihany koa ny fankasitrahany sy ny teny fampiononany i Luly, mpanao sary fandravahana iray hafa avy any Buenos Aires:
Nasongadin'i Nik, mpanao tantara an-tsary ho an'ny ankizy, fa “kamboty” i Mafalda ankehitriny:
Izy no lehibe indrindra tamin'ny rehetra.
Naneho ny alahelony ihany koa ilay mpanakanto Horacio Altuna avy any Cordoba:
Nanao veloma farany an'i Quino niaraka tamin'ny soritsoritra natolony ho azy ilay mpanao sary mahatsikaiky malaza Tute (zanaky ny mpanao sariitatra malaza Caloi):
Nandao antsika androany i Quino, izay tiako be. Lehiben'ny lehibe, tsy hay hadinoina. Misaotra betsaka, Quinito ♥ ️
(Manao soritsoritra aho ho fanaovam-beloma azy).
Nanome voninahitra an'i Quino ihany koa ireo mpanakanto manerantany. Namorona an'ity sary ity ilay mpanao sariitatra Grika Panos Zacharis:
Nanao veloma azy farany tamin'alahelo i Nani, mpanakanto Kolombiana, izay efa nihaona manokana tamin'i Quino:
Voninahitra ho ahy ny nihaonako tamin'i Quino, olona miavaka izy, mahitsy, mora atonina ary be fitiavana izy. Izay no nahatonga ny sangan'asany lehibe (aingam-panahy avy amin'i Mafalda i Magola) ho mpampianatra ahy foana, saingy miaiky aho fa tsy mahatakatra ny ambaratonga misy azy; misaona ny fahalasanany ankehitriny, izahay roa, izahay telo.
Avy any Brezila, hoy i Carlos Ruas:
Malahelo an'i Quino izao tontolo izao. Ankehitriny, ao an-tempolin'andriamanitry ny tantara an-tsary izy, ary tsy manan-tsahala ny lova navelany. Raha tena miezaka mafy amin'ny asako aho anio dia noho ny nianarako taminy.
Naneho ny fankasitrahany ny lovan'i Quino ilay mpanao sariitatra Shileana Nagú:
Misaotra betsaka, Quino.
Midera ny fikomian'ilay zazavavy kely Mafalda ilay Frantsay Fred Sochard, ary miresaka momba ny adihevitra vao haingana momba ny fitafian'ireo mpianatra amin'ny lisea:
Ho fanomezam-boninahitra an'i Quino… miaraka amin'i Mafalda, tovovavy iray izay tsy mety mangina.
Amin'ny sary: ​​“Izahay, zazavavy, miakanjo araka izay tianay.”
Nizara ny fiantraikan'izay nataon'i Mafalda teo amin'ny taranaka ankizy nifandimby ilay mpanao sariitatra Venezoeliana EDO Ilustrado:
Veloma, Quino. Miaina anaty tontolo tsaratsara kokoa noho ianao i Mafalda sy ny kilonga rehetra.
Ary maneho ny alahelony ao amin'ny endrik'i Mafalda ilay Hondioràna mpanao sary fandravahana, Allan McDonald:
Aza mandeha fa efa nampanantena ny hihinana lasopy aho.
Ity no fanomezam-boninahitra avy amin'ny mpanao sariitatra Italiana Mauro Biani:
Amin'ny sary: ​​“Milaza izao tontolo izao fa efa malahelo anao izy. Miverena!”.
Tsy misy isalasalana fa hitoetra mandrakizay ao am-pon'ny olona ny lova navelan'i Quino sy ny fampianarany, ​​ary hitohy hahafaly ireo taranaka hoavy ny asany.